Paikady - Foton Motor Group Co., Ltd.
Foton indray mipi-maso
Mombamomba ny orinasa Foton Global
Paikady fampandrosoana ny fanatontoloana
Fahaizana manavao ny haitao manerantany
Ny fivarotana fiara maintso no laharana voalohany amin'ny indostria nandritra ny taona maro nifandimby
Tranga tsara indrindra
Miara-miasa ny tantaran'ny mpanjifa
Fiara mpitondra masiaka
TRUCKS MEDIUM & DUTY
Fampisehoana moto eny an-tsena
Tompondaka amin'ny hazakazaka
Hazakazaka moto iraisam-pirenena
Marketing amin'ny traikefa
Fihetseham-po amin'ny fandefasana, test drive ary fifandraisana amin'ny mpanjifa
Serivisy 1 485 any amin'ny firenena sy faritra 80 mahery
Fanomezana ny faritra manerantany
Miorina any Hongkong, ny famatsiam-bola FOTON any ampitan-dranomasina dia nanitatra ny asany manerantany
Tongasoa eto amin'ny ekipanay
Foton Motors dia mifikitra amin'ny làlana fanitarana orinasa mifototra amin'ny fitomboan'ny atiny, mifantoka amin'ny indostrian'ny fiara, ary manangana marika 100 taona. Ho avy tsy ho ela, ny Foton Motor dia ho lasa orinasa maotera lehibe sy matanjaka amin'ny haitao manerantany. ary mamorona vokatra mahomby izay mifanaraka amin'ny fenitra manerantany ho an'ny mpanjifany.
Foton Motor Industry 4.0
Ny vidin'ny fihodinan'ny mpanjifa, ny vidin'ny fiainana (TCO) mifototra amin'ny vokatra ary ny vahaolana mifandraika dia azo amin'ny alàlan'ny Foton Motors Industry 4.0.
2 + 3 + N
Miaraka amin'ny lalam-pampandrosoana manerantany an'ny "2 + 3 + N", dia ho tsapantsika ny fivoaran'ny indostrialy manerantany ary hanome ny mpanjifa manerantany vokatra sy serivisy maotera avo lenta.
Mba hananganana rafitra fitarihan-danja mifamatotra amin'ny ankapobeny ary ho lasa iray amin'ny fifaninanana fototra an'ny Foton Motor.
Ho an'ny ho avy.
Miorina amin'ny Internet of Things, angon-drakitra lehibe, ary sehatra rahona, voaorina ny ekôlôjika mifantoka amin'ny mpanjifa. Ny angon-drakitra lehibe dia ampiasaina handroahana ny fitantanana manan-tsaina ny orinasa ary ny fanamafisana lehibe ny mpanjifa dia azo amin'ny alàlan'ny vokatra marani-tsaina, ozinina marani-tsaina ary famokarana manan-tsaina.
Voalaza tao am-po izay misy azy io: consectetur adipiscing elit.scelerisque.
Jereo ny pejy famisavisana ilay rakitra ho an'ny fampahalalana fanampiny.
Foton Motor dia manangona fahendrena manerantany ary nanangana fiaraha-miombon'antoka amin'i Cummins, mpanamboatra motera tsy miankina lehibe indrindra manerantany, Daimler Group, mpanamboatra fiara lehibe indrindra manerantany, ary ZF, mpamatsy teknolojia fampitaovana sy chassis lehibe indrindra manerantany. Orinasa mitarika toa an'i Bosch sy WABCO, orinasa mpiorina lehibe, dia namorona fiaraha-miasa stratejika ary nanangana rafitra fitantanana rojom-pandraharahana manerantany.
FOTON CUMMINS, nanomboka ny taona 2006
Amin'izao fotoana izao, ny Foton Cummins Engine Company Limited (BFCEC) dia manana Cummins F 2.8L sy 3.8L maivana, 4.5L motera antonony, G 10.5L ary 11.8L milina diesel mavesatra, miaraka amin'ny fampiasam-bola mitentina 4.9 miliara yuan ary ny vokatra isan-taona misy vondrona 520,000, dia hahatratra isan-karazany ny fenitry ny tsena sy ny fenitra fandefasana.
Foton Motor sy Cummins Inc. dia nanao sonia fifanarahana
Foton Motor sy Cummins Inc. dia nanao sonia fifanarahana hananganana orinasa mpiray hina 50/50. Ny orinasam-piraisankina vaovao dia hamokatra karazana milina diesel maivana ary mavesatra be any Beijing, Sina.
Beijing Foton Cummins Engine Co, .Ltd dia niorina
Beijing Foton Cummins Engine Co, .Ltd dia natsangana, fiaraha-miombon'antoka eo amin'ny FOTON sy Cummins miaraka amin'ny fampiasam-bola 50:50, ny fampiasam-bola total RMB 2,7 miliara.
Bejing Foton Cummins Engine Co., Ltd dia vonona hamokatra
Bejing Foton Cummins Engine Co., Ltd dia vonona hamokatra ary novokarina ny ISF2.8L sy ISF 3.8L ho an'ny LDT. Ireo maotera roa dia misy endrika endrika avo lenta, fampisehoana avo lenta ary famoahana ambany, mifanaraka amin'ny fitsipiky ny famoahana emission ambonin'ny Euro IV; fivoahana 400 000 isan-taona, toby famokarana motera maivana indrindra any Shina.
Ny sekreteram-panjakana amerikana teo aloha John Forbes Kerry dia mitsidika an'i Foton Cummins
R&D iraisan'i Foton sy Cummins, mifanaraka amin'ny fenitry ny famoahana Euro VI- Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Etazonia ny motera ISG.
R&D iraisan'i Foton sy Cummins, mifanaraka amin'ny fenitry ny famoahana Euro VI- Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Etazonia ny motera ISG. Ny motera G Series vaovao an'ny Cummins, dia novokarina tany Beijing Foton Cummins Engine Co., Limited (BFCEC).
Foton sy Cummins dia nanao sonia ny Memorandum fiaraha-miasa stratejika ny kamio maitso sy manan-tsaina
Memorandum fiaraha-miasa stratejika an'ny kamio maitso sy manan-tsaina nosoniavina tao amin'ny Forum Fifantohana angovo any Etazonia-Sina.
Teraka ny motera voalohany
Ny faha-10 taonan'ny Foton Cummins natao ary teraka ny motera voalohany
FOTON DAIMLER, nanomboka ny taona 2003
Foton Motor ary mpamokatra fiara lehibe indrindra manerantany Daimler Group Alemanina dia nanangana fiaraha-miasa miaraka amin'ny Beijing Futian Daimler Automotive Co., Ltd. Ny orinasa mpiara-miasa dia miasa eo ambanin'ny marika Futian Auman, izay mamokatra ny vokatra kamiao mavesatra Auman sy ny kamio mavesatra OM457 motera misy fenitra sy pahefana famoahana fahazoan-dàlana Daimler izay mahatratra ny Euro V sy 490 tsoavaly.
Manaova sonia ny MOU
Daimler sy Foton dia nanao sonia Memorandum Of Understanding tao Beijing.
Foton dia nahatratra ny fifanarahana momba ny famokarana fiara fivarotana miaraka amin'i Daimler AG any Alemana
Tamin'ny 29 Janoary 2009, tao Berlin, Foton dia nahavita fifanarahana momba ny famokarana fiara ara-barotra niaraka tamin'ny Alemana Daimler AG. Nifanaraka ny roa tonta hametraka fiaraha-miombon'antoka amin'ny fifanarahana shareholder 50/50 ho an'ny famokarana kamio antonony sy adidy mavesatra ary koa ny haitao sy serivisy mifandraika amin'ny fampandrosoana. Ny Foton-Daimler Joint Venture dia mahazo tombony amin'ny fivarotana kamiao Foton Auman manerantany.
Manaova sonia ny fifanarahana iaraha-miasa
Tamin'ny 16 Jolay 2010, Foton sy Daimler dia niara-nanao sonia ny Joint Venture Contract tao amin'ny Great Hall of the People any Beijing, Sina.
Niorina i Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd.
Tamin'ny 18 febroary 2012, Beijing Foton Daimler Automotive Co., Ltd. dia niorina niaraka tamin'i Foton sy Daimler izay samy manana tompony 50%, izay manamboatra kamiao antonony sy mavesatra be an'ny Foton'sAuman ary manana vola 490hp Euro V Mercedes- nahazo alalana Daimler Maotera mavesatra Benz OM457.
AUMAN EST dia natomboka tao amin'ny Beijing Motor Show.
AUMAN EST (Energy Super Truck) novolavolain'ny fiaraha-miombon'antoka ary ampandehanin'i Mercedes-Benz OM457 dia natomboka tao amin'ny Beijing Motor Show.
FOTON dia nanangana fiaraha-miombon'antoka amin'ny zotram-piaramanidina 1 voalohany sy ny mpamatsy teknolojia chassis ZF mba hamokarana trangam-pandefasana avo lenta ho an'ny fiara ara-barotra mavesatra sy mavesatra.
Ny dingana 1 an'ny tranga fandefasana ho an'ny fiara ara-barotra maivana dia hapetraka amin'ny andro voalohan'ny volana Janoary 2019 miaraka amin'ny vokatra 160,000 isan-taona. ary ny Pphase 2 dia haorina ary hampiharina amin'ny andro voalohan'ny volana Janoary, 2020 miaraka amin'ny vokatra 320.000 isan-taona. Ny dingana 1 amin'ny tetik'asa mavesatra dia hampiharina amin'ny andro voalohan'ny volana janoary 2019 miaraka amin'ny fivoarana isan-taona ny tranga fitaterana fiara 115000 sy ireo mpamily 20.000. raha ny dingana 2 kosa dia hampiharina amin'ny andro voalohan'ny volana janoary 2022, miaraka amina fivoahana isan-taona ny tranga mavesatra 190,000 mavesatra 40,000.
FIANAKAVIANA FOTON GLOBAL
Rehefa nanjary nalaza manerantany ny olana ara-tontolo iainana, dia niara-niasa tamin'ny orinasa fanta-daza ny FOTON, anisan'izany ny Cummins, ZF, CEVA Logistics, FAURECIA, WABCO, Continental ary Rheinland ary nanangana China Intelligent Connected Super Truck Alliance (CICSA) tamin'ny volana Jona 2016, mikendry ny hahatonga ny teknolojia handroso ary hanangana vokatra mpamonjy herinaratra, maitso ary mifandraika amin'ny saina. Ny tanjona telo amin'ny fiaraha-miasa dia:
Amin'ny maha-mpampiorina ny fiaraha-miasa azy, FOTON dia nanolotra drafitra Super kamio. Raha ny voalazan'ny drafitra dia nanao ezaka nandritra ny 4 taona ny FOTON ary nanangana ny kamio super voalohany mifanaraka amin'ny mason-tsivana Euro R&D --- AUMAN EST, izay natomboka manerantany tamin'ny volana septambra 2016. Voamarina tamin'ny alàlan'ny fitsapana an-dàlana 10 tapitrisa km ilay kamio. . Ny teknolojia vaovao 208 sy ny modules 4 (body, chassis, powertrain ary ny herinaratra) vaovao 208 dia mampihena ny fanjifana solika hatramin'ny 5-10%, mampihena ny famokarana gazy 10-15% ary manatsara ny fahombiazan'ny fitaterana 30%; ny fanampiana manam-pahaizana amin'ny familiana fiara, fiainana servisy 1.500.000km an'ny B10 ary elanelam-potoana manitatra amin'ny 100,000km dia manatsara ny fivoaran'ny rafitra logistika maoderina, avo lenta ary avo lenta. Ilay kamio super dia mihoatra ny kamio. Izy io dia rafitra fitaterana ho an'ny ho avy mikendry ny mitondra fiara mitokana, manatsara ny fahombiazan'ny fitaterana sy ny fiarovana ny fifamoivoizana ary mampihena ny famoahana gazy karbonika.
Mba hananganana kamio lehibe mahomby sy manan-tsaina ary mifandray hampihenana ny fanjifana solika amin'ny 30% (na herinaratra madio), hampihena ny famokarana gazy 30% (na aotra) ary hanatsara ny fahombiazan'ny fitaterana 70%.
Manangana ekolojika indostrialy misy fiara mifandraika manan-tsaina manerantany amin'ny fanavaozana sy fampandrosoana vaovao
Manangana sy mampivelatra ny fifamoivoizana manan-tsaina manerantany sy ny tanàna manan-tsaina.
Hotline Serivisy ho an'ny mpanjifa manerantany Foton
Fanavaozana ao amin'ny YouTube
Misoratra anarana hahazoana fampahalalana ny maodely tianao indrindra
Foton indray mipi-maso tetika fanavaozana Sutainability Applications
Fiara mpandeha Kamio maivana maivana Kamio mpanelanelana sy andraikitra mavesatra fiara fitateram-bahoaka & mpanazatra
Asehoy ny tranga Fanatanjahan-tena amin'ny môtô Motor Show
Fikarakarana tanteraka Foton Accessories Finance
Mifandraisa aminay asa & asa